Ukwentula kwabashayisibhakela basemakhaya kwamkhipha eringini waqoka ukuba ngumhleli wezimpi - Impempe
Ukwentula kwabashayisibhakela basemakhaya kwamkhipha eringini waqoka ukuba ngumhleli wezimpi
March 10, 2021 March 10, 2021 Impempe.com
Ukubona usizi nezinselelo ababhekana nayo abanentshisekelo yokuba ngabashayisibhakela ezingeni elikhokhelayo abahlala ezindaweni zasemakhaya yikho okwafaka uNomvelo Magcaba-Shezi ugqozi lokuvula inkampani ehlela izimpi.
UMagcaba-Shezi ungomunye wabahleli bezimpi abakhula ngendlela emangalisayo kuleli, futhi okusabhekwe lukhulu ekutheni babuyisele lo mdlalo wamankomane izithunzi.
Ngaphambi kokuba abe nguphromotha, uMagcaba-Shezi wayengumshayisibhakela kodwa ukubona ukugqoza kwezimpi kwamenza waqhamuka nelinye icebo elisiza ekukhuliseni isibhakela libe naye limenza asebenze kusho njengoba ezifela ngaso.
“Into engayibuka kakhulu ukuthi amabhokisa abehlupheka kakhulu ezindaweni zasemakhaya engalitholi ithuba. Njengami nje, ngangike ngihlale unyaka wonke ngingayitholi impi kodwa ngibe nginayo ilayisensi futhi ngijima,” usho kanje ekhuluma neMpempe.
“Yingakho ngabe sengicabanga ukungena ekuhleleni izimpi ukuze ngikhulise kahle abashayisibhakela bese ngiyobaqhatha ezingeni lamazwe ngamazwe.
“Inhloso enkulu ukunika amabhokisa asemakhaya ithuba ngoba ngiyabazi ubuhlungu nobunzima ababhekana nabo,” kuqhuba yena.
UMagcaba-Shezi, ohlela izimpi ngaphansi kwenkampani yakhe iMvelo Promotions, uzpba bezimpi ngoMgibelo ehholo laseMgungundlovu la ezinkulu kungezamabhande eWBF ezingeni le-Afrika.
Uthe njengazo zonke ezinye izimboni, nabo bashayekile kuqubuka iCovid-19, kodwa wabonga usizo lukahulumeni wesifundazwe ngokubeseka kwabo.
“YiCovid esimise kabi. Kumanje noma sizoba nomcimbi wesibhakela kodwa abalandeli ngeke babe khona. Kuzoba nje abaphathi, amajaji namabhokisa kuphela okuyinto enzima ngoba inhloso ukufinyelelisa amankomane kubantu.
“Asisakwazi ukufinyelela ngendlela esifisa ngayo ngenxa yalesi sifo. UMnyango weMidlalo KwaZulu-Natal usisizile welula isandla waselekelela kulesi sikhathi esibi. Usizo lwabo kwenze sakwazi ukusheshe siqhubeke nokuhlela izimpi,” kuchaza uMagcaba-Shezi.
Previous Previous post: Uthi ngeke ajabule uma engakora kwiMaritzburg oweChiefs
Next Next post: ISundowns iziqhathe nePirates kolandelayo weNedbank Cup